February 17, 2017 - 8:02 AM News Code : 812218 Source : ABNA Link:
၁။ ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) အနေဖြင့် မိန့် ကြားတော်မူပါသည်။
အကြင်မည်သူမဆို ကျနော်၏ သမီးတော် ဖွာတွေမာ (စ.အ) ကို ဒုက္ခပေးမည် ၊နှောက်ယှက်မည် ၊သူမကို စိတ်ဆိုးအောင် ပြုမည်ဆိုလျှင် ၎င်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်ကို ဒုက္ခပေးခြင်း စိတ်ဆိုး အောင်လုပ်ခြင်း မည်၏။ အကြင်မည်သူမဆို ကျွန်ုပ် ကို ဒုက္ခပေးမည်ကျွန်ုပ်ကို စိတ်ဆိုးအောင် ပြုမည် ဆိုလျှင် ၎င်းအနေဖြင့် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သခင်အား ဒုက္ခပေးခြင်း စိတ်ဆိုး အောင်လုပ်ခြင်း မည်၏။
ကျနော် မေးခွန်းကတော့ စဟီးဘုခါရီ မှာ လာရှိ တဲ့ ဟဒီးစ်တော် နှစ်ပါး နှင့်ပတ်သက် တာဖြစ် ပါတယ်။ ဤ ဟဒီးစ်တော် နှစ်ပါး ဟာ ဤကျမ်း ၏ စာမျက်နှာ ဘယ်လောက် နှင့် ဘယ်အပိုင်း တွင် တင် ပြထားတာ ဖြစ်ပါသလဲ ?
၂။ ဟဇရသ် ဖွာတွေမာ (စ.အ) အနေဖြင့် မိန့် ကြားတော်မူပါသည်။
ကျမကို အဗူဘကဲရ် နှင်အိုမရ် အနေဖြင့် ဒုက္ခပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျမ ဤ လူ၂ဦး အပေါ် စိတ်ဆိုး ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျနော်ကို ဤ ဟဒီးစ်တော်နှစ်ပါး ဟဒီးစ်တော်အမှတ် နှင့် စာမျက်နှာ အမှတ်ကို ဖော်ပြပေးပါ။ အကြောင်းမှာ ကျနော်အနေဖြင့် စွန်နီ ညီနှောင် အချို့ နှင့် ဤခေါင်းစဉ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عيينة عن عمر و ابن دينار عن ابن أبی مليكة عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة أنّ رسول اللّه صلی اللّه عليه و سلم قال: فاطمة بَضْعَة منّی فمن أغضبها أغضبنی۔
မဟာ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) မိန့်တော်မူပါသည်။ ဖွာတွေမာ (စယအ) ကျွန်ုပ်အသည်း၏ အစိတ် အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အကြင်မည်သူမဆို သူမကို စိတ်ဒေါသ ထွက်အောင် ပြုခဲ့မည်ဆိုလျှင် (တစ်နည်းအားဖြင့် ) ၎င်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်ကို စိတ်ဒေါသထွက်အောင် ပြုခြင်း မည်လေ၏။
စဟီး အလ် ဘုခါရီ ကျမ်း အတွဲ ၄ စာမျက်နှာ ၂၁၀ (ဟဒီးစ်တော် အမှတ် ၃၇၁၄ ) ၊ ကေသာဗို ဖွာစာအေလေ အလ်ဆွဟာဗေ ၊ အခန်း ၁၂ ၊ ဗါဗ် မနာကေဗို ကရာဗသ်သေ ရစူလ် လွလ္လာဟ် ဆွလ္လာဟ် ဟို အလိုင်ဟေ ဝစလာမ် အတွဲ ၄ ၊စာ၂၁၉ (ဟဒီးစ်တော် အမှတ် ၃၇၆၇ ) ၊ကေသာဗို ဖွာစာအေလေ အလ်ဆွဟာဗေ ၊ အခန်း ၁၂ ဗါဗ် မနာကေဗို ဖွာတွေမာ အလိုင်ဟာစလာမ်
عَنِ ابْنِ أَبِی مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله عليه و سلم يَقُولُ وَ هْوَ عَلَی الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِی هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِی أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِی طَالِب فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِب أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَ يَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِی بَضْعَةٌ مِنِّی، يُرِيبُنِی مَا أَرَابَهَا وَ يُؤْذِينِی مَا آذَاهَا.
မစ်ဝရ် ဗင်မခ်ရမဟ် အနေဖြင့်ပြောပါတယ်။ ကျနော်အနေဖြင့် အလ္လာဟ် ရစူလ် (ဆွ) ထံ မှ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်တော်အနေဖြင့် မင်ဗရ် အပေါ်မှ မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဟရှမ်းမ်ဗင် ဗိုဂိုင်ရဟ် အနေဖြင့် ၎င်း၏သမီးကို အလီ အေဗ်နေ အဘီသွာလစ်ဗ် နှင့်အိမ်ထောင်ပြု ပေးရန် ခွင့်တောင်း ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ကျနော်(မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ) အနေဖြင့် ခွင့်မပေးခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အလီ အနေဖြင့် ကျွန်ုပ် ၏ သမီးတော် (ဖွာတွေမာ (စ.အ) ) ကို ကွာရှင်း ပြတ်စဲပေးပါ။ပြီးနောက် သူ (အလီ ) အနေဖြင့် သူ(ဟရှမ်းမ်) ၏သမီးကို နေကာပြုနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ မိန့်တော်မူပါသည်။ ဖွာတွေမာ (စ.အ) ကျွန်ုပ်အသည်း၏ အစိတ် အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အကြင်မည်သူမဆို သူမကို စိတ်ဆင်းရဲအောင် ပြုမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်ကို စိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကြင်မည်သူမဆို သူမကို ဒုက္ခ ပြုမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်ကို ဒုက္ခပေး ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စဟီး အလ် ဘုခါရီ ကျမ်း အတွဲ ၆ စာမျက်နှာ ၁၅၈ (ဟဒီးစ်တော် အမှတ် ၅၂၃ ) ကေသ ဗွန်နေကာ ၊ဗါဗ် ၁၀၉ ၊ဗါဗ် ဇန်ဗေရ်ရ ဂျို လေ အန်မေဗ်နသေဟ် ဖီးလ်ဂိုင်ရ သေဝလ် အန်ဆွာဖ်
စဟီး မွတ်စလင်မ် ကျမ်း အတွဲ ၇ စာမျက်နှာ ၁၄၁ (ဟဒီးစ်တော် အမှတ် ၆၂၀၁ ) ကေသာဗို ဖွာစာအေလေ အလ်ဆွဟာဗေ ရဇီယလ္လာဟ်သအာလာ အန်နဟွမ် ၊ ဗါဗ် ၁၅ ဗါဗ် ဖွာစာအေလေ ဖွာတွေမာ ဗင်သင်န် နဘီ အလိုင်ဟာစ် ၊ ဆွလာသိုဝစလာမ်
فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله عليه و سلم فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْر، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّی تُوُفِّيَتْ.
ပြီးနောက် ရစူလ် (ဆွ) ၏ သမီးတော် (ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာဟ် (စ.အ) ) အဗူဘကဲရ် အပေါ် စိတ်ဆိုးခဲ့ ပါတယ်။ ပြီးနောက် သခင်မကြီး အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အမိန့်တော်ခံယူတော်မူခဲ့သည့် အချိန် တိုင် အဗူဘကဲရ် နှင့် လုံးဝ အဆက်အသွယ် ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။.
စဟီး မွတ်စလင်မ် ကျမ်း အတွဲ၎ စာမျက်နှာ ၄၂ (ဟဒီးစ်တော် အမှတ် ၃၀၉၃) ၊ကေသာဗိုလ် ဖရ်စိုလ် ခွမ်စ် ၊ဗါဗ်၊ ဗါဗ် ဖရ်စိုလ် ခွမ်းမိုစ်
အခြား ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု ကို လည်းပဲ ဘူခါရီ မှ တင်ပြထားပါတယ်။
فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَی أَبِی بَكْر فِی ذَلِكَ - قَالَ - فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّی تُوُفِّيَتْ .
ဟဇရသ် ဖွာတွေမာ (စ.အ) ) အဗူဘကဲရ် အပေါ် စိတ်ဆိုးခဲ့ ပါတယ်။ပြီးနောက် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အမိန့်တော် ခံယူသည့် အချိန်တိုင် ၎င်း နှင့် စကား မပြောပဲနေလေ ၏။ တစ်နည်း အားဖြင့် ကွယ်လွန်ချိန်ထိ ရစူလ်လေ ခိုဒါ (ဆွ) ၏ သမီးတော် မှ အဗူဘကဲရ် နှင့်စကား မပြောခဲ့ ချေ။
စဟီး မွတ်စလင်မ် ကျမ်း အတွဲ ၅ စာမျက်နှာ၈၂ (ဟဒီးစ်တော် အမှတ် ၄၂၄၀) ၊ကေသာဗိုလ် မဂါဇီ ဗါဗ် ၃၈ ဗါဗ် ဂဲစ်ဇ်ဝသိုလ်ခိုင်ဗရ်
စဟီး မွတ်စလင်မ် ကျမ်း အတွဲ ၅ စာမျက်နှာ ၁၅၄ (ဟဒီးစ်တော် ၄၄၇၁) ၊ကေသာဗိုလ် ဂျေဟာဒ် ဝလ်စိုင်ရ် (အလ်မဂါဇီ)၊ ဗါဗ်၁၆ ဗါဗ် قَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم، ج لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ
فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّی مَاتَتْ .
ပြီးနောက် ဘုခါရီ အနေဖြင့် တတိယ ရီဝါယသ်တော်ကို ရေးသားထားပါတယ်။
ဟဇရသ် ဖွာတွေမာ (စ.အ) အနေဖြင့် အဗူဘကဲရ် နှင့် လုံးဝအဆက်အသွယ် ( အခေါ်အပြော) မလုပ်တော့ချေ။ကွယ်လွန် သေဆုံးသွားသည့်အချိန်တိုင် မည်သည့်စကားမျှ မပြောခဲ့ချေ။
စဟီး ဘုခါရီ ကျမ်း အတွဲ ၈ စာမျက်နှာ ၃ (ဟဒီးစ်တော် အမှတ် ၆၇၂၆ ) ၊ကေသာဗိုလ် ဖာရာအေဇ် ဗါဗ် ၃ ဗါဗ် قَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم، ج لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَة